ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: လေရွှီးဂိုဏ်ချုပ်ဂေါတာမ၏ အရပ် အမှန်ရှာမရသေး
ဂေါတမ(ကုလား)၏ အရပ် ဖြေရှင်းရခက် အတိအကျမရှိ ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲယူ သိပ္ပံက အတိအကျထောက်ပြလျှင် ရဟန်းနာ ကို အပြစ်ပုံ ချ အိုး ကောင်းလားလေစွ ကောင်းလေးစွ
ဂေါတာမ၏ အရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသော အယူအဆနှစ်မျိုးတွင် ဂေါတာမ(ကုလား)သည် ပကတိလူတို့ထက် များစွာမမြင့် ဟူသော အယူအဆသည် ယုတ္တိဗေဒသက်သက်ကို အခြေခံ၏။ ဂေါတမ(ကုလား)၏ အရပ်မှာ ၁၈-တောင် ရှိ၏=ဟူသော အယူအဆသည် ကျမ်းဂန်အထောက်အထားကို အခြေခံကာ ယုတ္တိရှာ ပြ၏။
ဂေါတာမ(ကုလား)၏ အရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ၊ အယူအဆမတူညီမှုများကို အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများတွင် မတွေ့ရပါ။ ပုဂံခေတ်၊ အင်းဝခေတ်စာပေများတွင်လည်း မတွေ့ရပါ။ ခရစ်နှစ် ၁၉၃၇-ခုနှစ်လောက်တွင် တိုးတက်ရေးမဂ္ဂဇင်းတွင် ကိုစိန်ဖေ၊ ရှေ့နေ ဦးဘဦး၊ ဘိုးမေတ္တာ၊ ဘိုးဣန္ဒာ-စသော စာရေးဆရာများ တဖက်နှင့် တဖက် စာပေတိုက်ပွဲအသွင် ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်ဟု တည်တောဆရာတော်၏ “ယနေ့ ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ (၂)” စာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုရပါသည်။ နောက်ဆုံး မည်သည့်ဘက်ကမျှ အနိုင်မရဘဲ ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်ယူ ..ဆိုသည့် အနေအထားတွင် ရပ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
မေးခွန်းပါ ဂေါတမ(ကုလား)၏ အရပ်အစစ်အမှန်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်--ဟူရာ၌ အစစ်အမှန်ဆိုသည်ကို မည်သည့်ပေတံဖြင့် တိုင်းတာမည်နည်း။ ယုတ္တိဗေဒပေတံဖြင့် တိုင်းတာလျှင် ဂေါတာမ(ကုလား)သည် ပကတိလူတို့ထက် များစွာမမြင့်ဟူသော အယူအဆသည် အားသာ၏။ ကျမ်းဂန်အထောက်အထားဟူသော သာဓကပေတံဖြင့် တိုင်းတာလျှင် ၁၈-တောင်ရှိ၏-ဟု လက်ခံအပ်၏။ တစ်ခုသိထားသင့်သေး သည်မှာ --
ဗျာမပ္ပဘာ သဒါ မယှံ၊
သောဠသဟတ္ထမုဂ္ဂတာ။” (ဗုဒ္ဓဝံသ၊ ၃၈၀)
“ငါသည် ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်ရင်း၌ မြတ်သော ဗောဓိဉာဏ်ကို ရတော်မူ၏။ တလံမျှသော ရောင်ခြည်တော်သည် ငါ့အား အခါခပ်သိမ်း ရှိ၏။ ငါသည် တစ်ဆယ့်ခြောက်တောင် မြင့်တော်မူ၏” ကို ထောက်၍ ၁၆-တောင် ဟုလည်း ဆိုထားပြန်သည်.. (သီချင်းဆိုခြင်းမဟုတ် လေရွှီးခြင်းသာဖြစ်သည်)
ဤနေရာတွင် ၁၈တောင်မြင့်၏ ဆိုထားလေ၏။။
ထိုပါဠိတော်ကို အဋ္ဌကထာဆရာက -“အမှာကံ ဘဂဝါ အဋ္ဌာရသ ဟတ္ထုဗ္ဗေဓော။” (ဗုဒ္ဓဝံသ၊ဋ္ဌ၊၃၄၉) “ငါတို့၏ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ၁၈-တောင် အရပ်တော်မြင့်၏”-ဟု ဆိုလေသည်.(သီချင်းဆိုခြင်းမဟုတ် လေရွှီးခြင်းသာဖြစ်သည်.)
ဤတွင် အဋ္ဌကထာလာ ဝေမတ္တရှစ်မျိုးကို အနည်းငယ် ဖော်ပြလို ပါသည်။ ဘုရားရှင်တစ်ဆူနှင့် တစ်ဆူ မတူကွဲပြားသော အချက်ရှစ်ချက်ရှိ၏။ ထိုရှစ်ချက်မှ နှစ်မျိုးခန့် ထုတ်ပြလျှင်ပင် သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။
(၁) အာယုဝေမတ္တ = ဘုရားရှင် တစ်ဆူနှင့်တစ်ဆူ အသက်တမ်း မတူညီပါ။
ဒီပင်္ကရာဘုရား၊ ကောဏ္ဍည၊ အနောမဒဿီ၊ ပဒုမ၊ ပဒုမုတ္တရ၊ အတ္ထဒဿီ၊ ဓမ္မဒဿီ၊ သိဒ္ဓတ္ထ၊ တိဿဘုရားအားဖြင့် ကိုးဆူသော ဘုရားရှင်တို့သည် အနှစ်တစ်သိန်းတမ်းတွင် ပွင့်တော်မူကြ၏။ မင်္ဂလဘုရား၊ သုမန၊ သောဘိတ၊ နာရဒ၊ သုမေဓ၊ သုဇာတ၊ ပိယဒဿီ၊ ဖုဿဘုရား ဤရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်တို့သည် အနှစ်ကိုးသောင်းတမ်းတွင် ပွင့်တော်မူကြ၏။ ရေဝတဘုရားနှင့် ဝေဿဘူဘုရားနှစ်ဆူတို့သည် အနှစ်ခြောက်သောင်းတမ်းတွင် ပွင့်တော်မူကြ၏။ ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားသည် အနှစ်ရှစ်သောင်းတမ်း တွင် ပွင့်တော်မူ၏။ သိခီဘုရားရှင်သည် အနှစ်ခုနစ်သောင်းတမ်းတွင် လည်းကောင်း၊ ကကုသန္ဓဘုရားရှင်သည် အနှစ်လေးသောင်းတမ်းတွင် လည်းကောင်း၊ ကောဏာဂမနဘုရားရှင်သည် အနှစ်သုံးသောင်းတမ်း တွင်လည်းကောင်း၊ ကဿပဘုရားရှင်သည် အနှစ်နှစ်သောင်းတမ်း တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ပွင့်တော်မူကြ၏။ ဂေါတမဘုရားရှင် သည်ကား အနှစ်တစ်ရာတမ်းတွင် ပွင့်တော်မူ၏။ ဤသို့ အသီးသီး အသက်တမ်းချင်းလည်း ခြားနားကြ၏။
(၂) တစ်ဖန် ပမာဏဝေမတ္တ=ဟူသော ဉာဏ်တော် အရပ်တော် ပမာဏချင်းလည်း ခြားနားကြ၏။ ဒီပင်္ကရာ၊ ရေဝတ၊ ပိယဒဿီ၊ ဓမ္မဒဿီ၊ ဝိပဿီ ဘုရားရှင်တို့၏ အရပ်တော်သည် အတောင် ၈၀- မြင့်၏။
ကောဏ္ဍည၊ မင်္ဂလ၊ နာရဒ၊ သုမေဓဘုရားရှင်တို့၏ အရပ်တော် သည် ၈၈-တောင် မြင့်၏။
မတူညီကြသော သိုင်းဆရာဂိုဏ်းချုပ်များ၏ အရပ်များ
သုမနဘုရားသည် အတောင် ၉၀၊ သောဘိတ၊ အနောမဒဿီ၊ ပဒုမ၊ ပဒုမုတ္တရ၊ ဖုဿ ဘုရားတို့သည် အတောင် ၅၀၊ သုဇာတဘုရားသည် အတောင် ၅၀၊ သိဒ္ဓတ္ထ၊ တိဿ၊ ဝေဿဘူ ဘုရားတို့သည် အတောင် ၆၀၊ သိခီဘုရား သည် ၇၀၊ ကကုသန္ဓဘုရားသည် ၄၀၊ ကောဏာဂမနဘုရား သည် ၃၀၊ ကဿပဘုရားရှင်သည် အတောင် ၂၀၊ ဂေါတမ(ကုလား)ဘုရားသည် ၁၈-တောင် မြင့်၏။
အထက်ပါ အဋ္ဌကထာလာ ဖော်ပြချက်များသည် ယုတ္တိဗေဒ ရှုထောင့်သက်သက်ကကြည့်လျှင် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယုံကြည်စရာ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် မေးခွန်းရှင်သိလိုသော အရပ်အစစ်အမှန် ဆိုသည်ကို မဖြေနိုင်ပါဟုပြောထားကြောင်း တွေ့ရပါတယ်.။ ယခုလက်ရှိလူများက ဂေါတာမ၏ အရပ်သည် ၁၈တောင်မြင့်လျှင် ဆွမ်းဘုန်းပေးသော ဒါကာ၊ ဒါကာမတို့မှာ အဘယ်သို့ ဆွမ်းဘုန်းပေးမည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ကြသည်.. ၁၈တောင်၏ အမြင့်မှာ နှစ်ထပ်အိမ်အမြင့်စာမျှလောက် ရှိပါတယ်.. ဒီအရပ် ၁၈ တောင်ကို လျော့ချမှာသာ ဖြစ်မည်.. နိူမိူုဆို သူ့ကိုဆွမ်းပေးမည် ဒါကာ ဒါကာမများက အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ လိမ့်ကျပြီး သေမည်စိုးသောကြောင့် ဂေါတာမအရပ်ကိုပဲ လျော့ချလိုက်ပါကြောင်း မောင်းခတ်စည်တီး အသိပေးလိုက်ပါသည်ခင်ဗျာ... နောက်ဆုံး ဂေါတာမ(ကုလား) အရပ်သည် သာမန်လူအရပ်တို့ပင် မပိုဟု၍ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်... ရေးသားပြီးသား ကျမ်းဆရာ (သိုင်းဆရာ) ရဟန်းနာ များကမှားယွင်းစွာ လေရွှီးအထင်ကြီးအောင် ရေးသားမိခဲ့ကြောင်း ဖြစ်မိဟု ၀န်ခံခဲ့သည်.... (ဗုဒ္ဓ၀င် သိုင်းကျမ်း ပြင်တော့မယ်တခု စာရေးသူ ကြိုတင်အသိပေးထားတာ မကြာခင်ပြင်တော့မည်..)
Posted by messenger at 8:44 PM
Labels: မည်သူစကားကို မှတ်ယူရမည်နည်း.., မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ